Mapisarema 78 Zvinoreva Vhesi Ndima | MINYENGETERO MARI
musha Mavhesi eBhaibheri Mapisarema 78 Zvinoreva Ndima Ndima
Nhasi tichave takatarisana nazvo Pisarema 78 inoreva ndima nendima. Pasina kutambisa nguva yakawandisa nekuda kwehurefu hwePisarema, tichakurumidza kuzviitira nerubatsiro rwemweya mutsvene.
Teererai murayiro wangu, imwi vanhu vangu;
Rerekera nzeve dzako kumashoko omuromo wangu;
2 Ndichashamisa muromo wangu nditaure nomufananidzo;
Ndichataura mazwi ekare ekare,
3 Zvatakanzwa nekuziva,
Uye madzibaba edu akatiudza.
4 Hatingazvivanziri vana vavo,
Kuudza chizvarwa chinouya kurumbidzwa kwaIshe,
Uye simba rake nemabasa ake anoshamisa aakaita.
Iyi ndeimwe yeakawanda anotaura nezve mutemo washe. Inopomera vanhu kuti vape nzeve kumitemo yashe uye vachipasisa mutemo washe kubva kune chimwe chizvarwa kuenda kune chimwe chizvarwa. Izvi ndezvekuona kuti chizvarwa chega chega chevanhu chinosvika pakuziva kuti Mwari ndiani uye izvo izvo Mwari anotiraira kuti tiite.
5 Nokuti akasimbisa chipupuriro pakati paJakove,
Uye akatema mutemo muIsraeri,
Izvo zvaakaraira madzibaba edu,
Kuti vazivise vana vavo,
6 Kuti chizvarwa chinouya chizvizive,
Kuti vasimuke vazvizivise vana vavo,
7 Kuti tariro yavo ive muna Mwari,
Uye musakanganwa mabasa aMwari,
Asi chengeta mirairo yake;
8 Uye varege kufanana nemadzibaba avo,
Chizvarwa chakasindimara uye chinomukira.
Chizvarwa chisina [c] kururamisa moyo waro,
Uye mweya yavo yakanga isina kutendeka kuna Mwari.
Vana veIsrealite vaizivikanwa kunge vakaomesa mitsipa kana zvasvika pakuteerera Mwari nekutevera kutonga kwake. Chikamu chevhesi iyi chinotaura kuti mutemo washe unofanirwa kuziviswa kuzvizvarwa zvichauya. Havafaniri kunge vasina hanya nemutemo waMwari kuti varege kufanana namadzibaba avo vakasindimara.
9 Vana vaEfuremu, vakashonga nhumbi dzokurwa nouta,
Vakadzokera shure pazuva rehondo.
10 Havana kuchengeta sungano yaMwari;
Vakaramba kufamba mumutemo wake,
11 Vakakanganwa mabasa ake
Uye zvishamiso zvake zvaakavaratidza.
12 Iye akaita zvinhu zvinoshamisa pamberi pamadzibaba avo,
Munyika yeEgipita, mumunda weZoani.
13 Wakapamura gungwa, akavayambusa;
Uye akaita kuti mvura imire semurwi.
14 Masikatiwo wakavafambisa negore,
Uye husiku hwese nechiedza chemoto.
15 Akapamura matombo murenje,
Ndikavamwisa zvakawandisa semvura yakadzika.
16 Akabudisawo hova dzemvura padombo,
Uye akaita kuti kuyerera semvura.
Sungano yashe vana vaMwari kukunda. Rugwaro rwakaita kuti tinzwisise kuti Mwari vakatipa simba muna Kristu Jesu. Zvisineyi, isu tinokwanisa chete kushandisa simba iri nekuuya pakuziva kuti Kristu ndiani uye kugona kwesimba Rake.
Vana vaEfraimi vakakundwa muhondo nekuti vakaramba kuchengeta mirairo yaMwari.
17 Asi vakatonyanya kumutadzira
Nokupandukira Wokumusoro-soro murenje.
18 Vakaidza Mwari mumoyo mavo
Nekubvunza chikafu chemafancy avo.
19 Hongu, vakapopotera Mwari vachiti:
Vakati, "Mwari angatigadzirira chokudya murenje here?
20 Tarira, akarova dombo, mvura zhinji ikadzutuka, Hova dzakayerera; Anogona here kupa chingwa? Ungavigira vanhu vake nyama here?
Naizvozvo Jehovha wakazvinzwa, akatsamwa kwazvo; Ipapo moto ukaveserwa Jakove, Kutsamwa kukamukira Isiraeri.
Nekuti havana kutenda kuna Mwari, Uye havana kuvimba neruponeso rwake.
23 Kunyange zvakadaro wakaraira makore kumusoro, akazarura mikova yedenga,
24 R Mvura yakanayisa mana pamusoro pavo kuti vadye, Akavapa chingwa chekudenga.
25 Vanhu vakadya zvevatumwa; Akavatumira zvekudya vakaguta.
Mwari vanongotenda kutenda kwedu maari. Akakamura gungwa kuvana veIsreal, akashandisa shongwe yechiedza kuvatungamira murima, akagadzira nzira murenje uye anokonzeresa mvura kubuda mu dessert. Akatovadyisa zvine hunhu kuti varege kukonzeresa nenzara. Kunyangwe zvese izvi, vana veIsreal vachiri kusahadzika mupfungwa dzavo uye hasha dzaMwari dzakabatidzwa pamusoro pavo.
Izvi zvinongoratidza kuti tinofanira kudzidza kuvimba naMwari nguva dzose.
26 Akafambisa mhepo yakabva mabvazuva kudenga; Uye nesimba Rake akaunza mhepo yezasi.
27 Akanisawo nyama pamusoro pavo seguruva, neshiri dzine minhenga sejecha regungwa;
28 Akavarega vachiwira pakati pemisasa yavo, Pose-pose pavakagara.
29 Saka vakadya vakaguta,
Nekuti Akavapa kushuva kwavo.
30 Havana kutorerwa kushuva kwavo;
Asi chikafu chavo pachakange chiri mumiromo yavo,
Kutsamwa kwaMwari kwakavamukira, Akauraya vakakoresa pakati pavo.
Uye akauraya varume vakasarudzwa vaIsraeri.
32 Kunyange zvakadaro vakaramba vachitadza,
Uye havana kutenda mabasa ake anoshamisa.
33 Saka akapedza mazuva avo panezvisina maturo, Namakore avo panezvinotyisa.
Aya mavhesi anongoratidzira chete kuti Mwari vangarange sei chero munhu anoramba kutenda mumabasa ake anoshamisa kunyangwe paine humbowo hwese. Mwari mukuru uye Iye oga ane simba.
34 Zvino akati achivauraya, ipapo vakamutsvaka. Vakadzoka, vakatsvaka Mwari nomoyo wose.
35 Ipapo vakarangarira kuti Mwari ndiye dombo ravo, NaMwari Wokumusoro-soro Mudzikunuri wavo.
Asi vakamubata kumeso nemiromo yavo, Vakamurevera nhema nendimi dzavo.
37 Nekuti moyo yavo yakanga isina kutsunga kwaari, uye vakange vasina kutendeka pasungano yake.
38 Asi iye, zvaakanga ane tsitsi huru, akavakangamwira kuipa kwavo, akasavaparadza; Zvirokwazvo, kazhinji akadzora kutsamwa kwake, Akasamutsa hasha dzake dzose.
39 Akarangarira kuti vakanga vari nyama chete; Nemhepo, inopfuura, isingadzokizve.
40 Vakamumukira murenje kazhinji sei, Nokumunzwisa shungu mugwenga!
41 Hongu, vanoedzazve Mwari, uye Vachengeta Mutsvene waIsraeri.
42 Havana kurangarira simba rake: Zuva raakavadzikunura kubva kumuvengi,
43 Panguva yaakavaratidza zviratidzo zvake Nezvishamiso zvake pasango reZoani;
Mwari vane tsitsi. Chinyorwa chinoti Tsitsi dzake dzinogara nekusingaperi. Kunyangwe pakatarisana nehasha, Mwari achiri netsitsi. Anowanzo rangarira sungano Yake yaakapika kuna Abhurahama, Isaka naJakobho uye kazhinji, Anorega kutsiura vana veIsreal mberi.
Zvimwechetezvo muhupenyu hwedu, chibvumirano chenyasha chakaitwa kuburikidza neropa raKristu nguva zhinji chinotiponesa kubva pahasha dzaMwari.
44 Akashandura nzizi dzavo dzikava ropa,
Nehova dzavo, dzavakange vasingagoni kumwa.
45 Akatuma pakati pavo mapupira enhunzi, dzakavaruma, Namatafi, akavaparadza.
46 Akapa zviyo zvavo kumagutaguta, nezvavakabatira akazvipa mhashu.
47 Akaparadza mizambiringa yavo nechimvuramabwe,
Nemiti yavo yemitsamvi ine chando.
48 Mombe dzavo akadziisawo pachimvuramabwe, Zvipfuwo zvavo akazviisa pamheni.
49 Akatuma pakati pavo kutsamwa kwake kukuru, Nehasha neshungu nokutambudza;
Nekutumira ngirozi dzekuparadza pakati pavo.
50 Akagadzirira kutsamwa kwake nzira;
Haana kubvisa mweya wavo parufu, Asi akapa upenyu hwavo kuhosha;
51 Akaparadza matangwe ose paEgipita, Ivo vokutanga vesimba ravo pamatende aHami;
52 Asi akabudisa vanhu vake samakwai, Akavaperekedza murenje seboka rezvipfuwo.
53 Akavafambisa vakafara, vakasatya; Asi gungwa rakafukidza vavengi vavo.
54 Akavasvitsa kumuganhu wake mutsvene, iro gomo rakatorwa neruoko rwake rwerudyi.
55 Akadzingawo ndudzi pamberi pavo, Akavaganhurira ivo vave nhaka yavo, Akagarisa vaIsiraeri pamatende avo.
Aya mavhesi anongodzokorora izvo zvakaitwa naMwari kuvana veEjipitori nekuda kwevaIsrealite. Rudo rwake rwaanarwo kuvana veIsreal harwukanganisika, uye Anogona kuenda chero hurefu kuti ave nechokwadi chekuti vakachengeteka. Apo Pharoah akaramba kutendera vana veIsreal kuti vaende, Mwari akagara naFarao nekurova vana veEgypt nedenda rinotyisa.
56 Kunyange zvakadaro vakaidza Mwari Wekumusoro-soro, vakamutsamwisa, Vakasachengeta zvipupuriro zvake;
57 Asi vadzoka, vakaita zvinonyengera. Vakatsauswa souta hunonyengera.
58 Nekuti vakamutsa kutsamwa kwake namatunhu avo akakwirira, Vakamutsa godo rake nezvifananidzo zvavo zvakaveziwa.
59 Zvino Mwari akati achizvinzwa, akatsamwa kwazvo, Akasema Isiraeri kwazvo-kwazvo.
60 Naizvozvo akabva patabhenakeri yeShiro, Tende raakanga aisa pakati pevanhu;
61 Akaisa simba rake mukutapwa, Nokubwinya kwake muruoko rwomuvengi.
62 Vanhu vake wakavaisawo kumunondo; Akatsamwira nhaka yake kwazvo.
63 Moto wakapedza majaya avo, Uye vasikana vavo havana kuwanikwa.
64 Vapristi vavo vakaurayiwa nebakatwa,
Uye chirikadzi dzavo hadzina kuchema.
65 Ipapo Ishe akapepuka sapakutsumwa;
Semurume ane simba anodanidzira newaini.
66 Akarova vavengi vake,
Akavaisa mukuzvidzwa kusingaperi.
Mwari anoda chizvarwa chevanhu vanozopa nguva yavo mukumushandira. Boka rehondo yashe iyo ichateerera mirairo yake yese. Ndosaka Mwari vari kuchema kuti iyo mirairo ishe ipfuudzwe kubva kuchizvarwa kuenda kune chimwe, kuti chizvarwa chitsva chitye Ishe.
67 Akarambawo tende raJosefa, Akasanangura rudzi rwaEfuremu.
68 Asi akasarudza rudzi rwaJudha,
Gomo reZioni raAida.
69 Akavaka nzvimbo yake tsvene senhare dzakakwirira, Sapasi paakateya nokusingaperi.
70 Akasanangurawo Dhavhidhi muranda wake, Akamubvisa pamatanga amakwai;
71 Akandomutora paaifudza matunzvi aimwisa, Kuti ave mufudzi wavanhu vake Jakove, naIsiraeri nhaka yake.
72 Naizvozvo akavafudza nokururama komoyo wake; Akavaperekedza nouchenjeri hwamaoko ake.
Rudo rwaMwari haruna miganhu uye haruna rusaruro. Mwari akada gomo reZiyoni uye Akarisarudzira Judha. Mwari akada Abhurahama, Isaka naJakobho uye akaropafadza vana veIsreal nekuda kwerudo rwake. Akaita David mambo mukuru kutonga Isreal nekuda kwekuda kwake Judha.
Previous nyayaMapisarema 100 Zvinoreva Ndima Ndima
inoteveraMapisarema 18 Zvinorehwa Ndima neNdima